Vaovao - Rafitra fanamboarana rano mialoha ny osikazy
Misotro rano amin'ny paompy misy mineraly sy bakteria betsaka isika, ny virus amin'ny alàlan'ny mari-pana ambony dia afaka misotro rano madio ankehitriny dia fitaovana fanivanana ho an'ny "famokarana" avy eo, avy eo fitaovana inona avy?
Mamorona fitaovana rafitra osmosis mihodina amin'ny rano madio
Ny rafitra osmosis miverimberina dia amin'ny alàlan'ny sivana sarimihetsika multilayer dia hanafoana ny loto, na fitaovana tsara na ratsy, dia nolavina avokoa, tsy namela afa-tsy rano, ity fitaovana ity dia tena tsara, amin'ny alàlan'ny fitaovana sy paompy fanivanana, firafitry ny membrane, azo ampiasaina ireo fitaovana ireo ny sivana maloto, ahoana no fomba fiasan'ny rano madio? Ny voalohany dia amin'ny alàlan'ny paompy misy tosika avo lenta, fampitaovana osmosis miverimberina hanomezana tosika mahery ho an'ny fampidirana rano sy amin'ny alàlan'ny sosona ny filtration membrane osmosis miverimberina amin'ny rano, ny sasany amin'ireo famafana ny loto sy ny loto, na izany aza, dia nanaporofo marika lehibe iray ny rano madio dia ny fitondra, ny avo kokoa ny fitondra ny fahadiovan'ny rano ambany. Ka ahoana ny fanatsarana ny fahadiovan'ny rano madio io? Manana firafitra inona izy?
Ny fahadiovana avo lenta amin'ny fitaovana sy rafitra osmosis
Ny kalitaon'ny rano amin'ny alàlan'ny fitaovana suction pump tany am-boalohany ary manome hery
Ny fitoeran-drano tany am-boalohany
Ny fitrohana ny tanky rano tsy miova avy amin'ny paompy amin'ny alàlan'ny tanky buffer tany am-boalohany hanaovana, mba hisorohana ny famatsiana dia tsy mandeha
Fanesorana ireo zavamiaina bitika hanala ny loto ao anaty rano hanalana bakteria.
Sivana entona karbaona
Rano voasivana, na «bleach chlorine»
Ny toerana voafetra ao anaty kaontenera, na izany aza, ny fitaovana fitsaboana rano amin'ny fitoeram-bokatra nefa niforona tanteraka, ity fitoeran-javatra ity dia hapetraka hiatrehana ireo lava-drano tany am-boalohany na eo akaikin'ny rano, azonao atao ny manangona toerana sy mahatratra ireo fitaovana tsy misy mpiambina dia tsy ho nohafanaina nandritra ny fotoana lava ilay nifanarahana. , fitaovana fitsaboana rano voaaro tanteraka, izay mametraka ny kaontenera ho mora tantanana, nefa tsara tarehy ihany koa, azonao atao ny mametraka sarin-javatra isan-karazany amin'ny kaontenera, ho fanampin'ny fanamorana ny fandevenana azy amin'ny tany, dia ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana.
Fotoana fandefasana: Mar-17-2020